Shiidi Wheel qeybiyeyaasha iyo Warshad | Shiinaha shiidi Wheel-saareyaasha
Astaamaha wax soo saarka: badbaadada alaabada, waxtarka sare, saxsanaanta sare, xirnaasho badan, xasiloon oo waara, oo leh astaamaha u adkeysiga duufaanka sare, caabbinta saameynta, foorarsiga iska caabinta, xawaaraha xawaareynta degdegga ah, shiidiida siman, nolosha muddada dheer.
1. Saxanka ciidda ee grid-ka waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu beero carro mesh fibaayad ah oo si gaar ah loo farsameeyay.
2. Waxyaabaha soo-saarka: shabakadda isku-xidhka ah iyo isticmaalka hadhuudhka la xoqdo, cimri-dhererka adeegga, aagga biinanka weyn ee xidhashada, kala-baxa kuleylka iyo waxyaabo kale. Qiyaasta shiidku waa 3-5 jeer isla sheyga, isla markaana nabadgelyada ayaa sarreysa.
3. Waxay ku habboon tahay markabka, warshadaha baabuurta, ka saarista miridhku, ka saarista ranjiga iyo shaqooyinka kale
Kulayl-kulul leh cusbi tayo sare leh oo xoqan
Astaamaha alaabta: xasiloonida wax soo saarka wanaagsan, fiiqnaanta ma gubayso qaybta shaqada, qalbi adkaanta dhexdhexaadka ah, doorbidayo walxaha xoqan, xoog leh oo aan fududayn in la dhaco ，
waxayna leedahay astaamaha culeyska, saameynta iyo xoogga foorarsiga.
Badeecaduhu inta badan waxay ku habboon yihiin: birta caadiga ah (birta xagalka, birta laba jibbaaran, birta fidsan, rebar, tuubada birta, iwm.), Bir weyn, bir adag oo adag, birta aan lahayn, birta dhimatay, birta daawaha ah, iwm.